Nagarik News - 'आन्दोलन रोके संशोधन थमौती'
'आन्दोलन रोके संशोधन थमौती'
20 Dec 2015 | 07:58am
काठमाडौं- नेकपा एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरे सविधान थमौती राख्न सकिने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले पुरस्कार वितरण समारोहमा शनिबार नेपालले मधेसका अन्य मागबारे दलहरु सकारात्मक रहेको भन्दै आन्दोलन कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेका हुन्। 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्थामा विचार गरिने भनिएको छ,' नेपालले भने, 'मोर्चाले आन्दोलन रोकेर वार्तामा आए संविधान संशोधनलाई थमौती गर्न सकिन्छ।'
आफ्नो सहमति नभई सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मिलेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
नेता नेपालले सीमांकन गरिँदा थप समस्या नआओस् भनेर सचेत हुनुपर्ने बताए। '६ बाट ७ बनाउँदै त्रुटि भयो,' नेपालले भने, 'अहिले त्यही विषयलाई जातीय भावना उराल्न खोजिएको समयमा सीमांकन विषयमा गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ।' नेपालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जानकी मन्दिर प्रवेशको विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताबाट भएको व्यवहारको चर्को आलोचना गरे।
'मोर्चा कार्यकर्ताका आमा र हजुरआमा विधवा छैनन्? अनि विधुर पुरुषले मन्दिर जान पाउने कि नपाउने?' नेपालले भने, 'अहिले जे घटना भयो, यो नेपालको राष्ट्रपतिको मात्र नभएर विश्वभरका महिलाको अपमान हो।'
विवाह पञ्चमीको दिन जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारी विधवा भएको भन्दै उनले मन्दिर अपवित्र बनाएको आरोप लगाइएको थियो। मोर्चा कार्यकर्ताले मन्दिर परिसर शुद्धीकरण गरेका थिए। 'मोर्चाले अहिलेसम्म यो घटनाको न भर्त्सना गरेको छ न त त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नै। त्यसैले मोर्चाले त्यस्तो कामलाई प्रोत्साहित गरेको छ,' नेपालले भने, 'सति प्रथाको युग र सामन्ती युगमा फर्किन खोजेको हो?' उनले अधिकांश मधेसी जनता यस्तो कार्यको विपक्षमा रहेको बताए। मधेसी मोर्चाभन्दा अन्य दलले मत ल्याएको भन्दै नेपालले मधेसमा आफूमात्रै भएको नसम्झन चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा हृदयचन्द्रसिंह प्रधान पत्रकारिता पुरस्कार तीर्थ कोइराला, अग्नीशिखा पत्रकारिता पुरस्कार गोविन्द पोखरेल, वीरेन्द्र साह युवा पत्रकारिता पुरस्कार छेटु शेर्पा र डेकेन्द्र थापा साहसिक पत्रकारित पुरस्कार ईश्वरी जिएमलाई प्रदान गरियो।